पहिरोले मुहानमा क्षति पुर्‍याएपछि फिदिममा खानेपानीको हाहाकार- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ६, २०७८ लक्ष्मी गौतम
पाँचथर — कात्तिकको पहिलो साता आएको भारी वर्षासँगै गएको पहिरोले पानीको मुहानमा क्षति पुर्‍याएपछि पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम बजारमा चार दिनदेखि खानेपानीको हाहाकार भएको छ ।
पहिरोले मुहान भत्काउनुका साथै पाइप लाइनमा क्षति पुर्‍याएपछि खानेपानी आपूर्ति गर्न कठिनाई हुँदा पानीको चरम अभाव सिर्जना भएको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले जनाएको छ ।
फिदिममा पानी आयात गरिएको आप्तावा खोला मुहानको संरचनामा धेरै क्षति पुगेको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष गजाधर भट्टराईले बताए । यहाँबाट ल्याइएको पानी सदरमुकाम फिदिमका वडा नम्वर १, २ र ४ का २ हजार परिवारलाई वितरण गरिएको छ ।
पानीको अभाव सिर्जना भएपछि फिदिम नगरपालिकाले दमकलमार्फत् पानी ल्याएर बजार क्षेत्रमा वितरण गर्न थालेको छ । वडा नम्वर ४ का वडाध्यक्ष प्रकास गुरुङको अगुवाइमा दमकलबाट पानी वितरण सुरु गरिएको हो ।
‘हिजोदेखि आजसम्म २५ दमकल पानी वितरण गरिसक्यौं, धारामा पानी आउन सुरु नहुन्जेल अभियान जारी रहन्छ ’ गुरुङले भने । फिदिम २ मा रहेको अर्खौले धाराबाट दमकलमा पानी भरेर बजारमा वितरण गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ १८:१९
एमालेको रावल समूहलाई नेपालको व्यंग्य- १० बुँदे भन्नेहरूको हरिबिजोग भयो
काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विगतमा आफ्नै समूहमा रहेका तर १० बुँदेमा टेकेर एमालेमै बसेका नेताहरूप्रति व्यंग्य गरेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोक-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा शनिबार अध्यक्ष नेपालले १० बुँदेमा टेकेर एमालेमै बसेका नेताहरूको हरिबिजोग भएको भन्दै व्यंग्य गरेका हुन् । एमालेमा बस्नका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको 'आदेश पालन' गर्नुपर्ने नभए कुनै मर्यादा नरहने नेपालको भनाइ थियो । 'एमालेमा आदेश पालन गर्‍यो भने बस्न पाउँछ, आदेशको पालन गरेन भने कति ट्याउँ ट्याउँ गरेको ? कति ट्याउँ ट्याउँ गरेको ? १० बुँदे, भनेर सुन्नुपर्छ,' अध्यक्ष नेपालले भने, 'सुन्नुभएको छैन १० बुँदेको ट्याउँ ट्याउँ । १० बुँदे भन्ने साथीहरूको कस्तो हरिबिजोग ।'
एमालेमा नेताहरूको कुनै मर्यादा र सम्भावना नभएको नेपालको भनाइ थियो । एमाले छलफलमा नभई आदेशमा चलेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो ।
एमालेलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्‍याउन आफ्नो भूमिमा महत्वपूर्ण रहेको पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बताएका छन् । 'त्यो पार्टी कसैले बनाएको होइन, हामीले बनाएका हौं । दाबाका साथ म भन्दै छु,' अहिले नेतृत्वमा रहेकाहरू ३१ सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्रको दस्तावेज जारी गर्ने बेलामा, क्रान्तिकारी अपिल जारी गर्ने बेलामा कहाँ थिए भन्दै नेपालले थपे, 'कोअर्डिनेसन केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी जारी गर्दाखेरि, पोलिटब्युरो घोषणा गर्दाखेरि त्यसबेलाका योद्धाहरूमध्ये अहिले पनि मुकुन्द न्यौपाने हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ । म तपाईंहरूको साथमा छु । ३४ सालमा पुष्पलाल समूहबाट विद्रोह गरेर आएका जीवराज आश्रित हुनुहुन्न अहिले । मोदनाथ प्रश्रित हामीसँगै हुनुहुन्छ । मदन भण्डारी हुनुहुन्न ।'
जबजको सिर्जना मदन भण्डारीको अगुवाइमा आफूहरूले गरेको दाबी गर्दै नेपालले भने, 'मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएको विचार जनताको बहुदलीय जनवाद त्यसको सिर्जना कसले गर्‍यो ? मदन भण्डारीको अगुवाइमा हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले)ले गरेको थियो, केपी ओली एन्ड कम्पनीले गरेको होइन ।'
असार २७ गते गरेको १० बुँदे सहमतिलाई लिएर शुक्रबारमात्रै एमालेको स्थायी कमिटीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयन जस्ताको तस्तै नहुने भन्ने जवाफ दिएपछि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले ५ पन्ने फरक मत राखेका थिए । रावलले आफूहरूलाई पार्टीमा विभेद गरिएको आरोप लगाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट माधवकुमार नेपालले उनीहरूप्रति व्यंग्य गरेका हुन् ।
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ १७:४६